KIOSKA FANDEFASANA VOLA AO MAHAJANGA BE : Vola 50 tapitrisa Ariary norobain’ny jiolahy
Kioska fandefasana vola sy fakana vola no notafihan’ny jiolahy roa mitondra môtô teo Mahajanga be, ny harivan’ny alatsinainy teo, tokony ho tamin’ny efatra ora sy sasany hariva. 10 janvier 2018
Mpiasa iray ao amin’ity kioska ity no noravain’ny jiolahy rehefa hanatitra vola, amin’ny orinasam-pifandraisana. Nobedainy ary nokapohany maritoa ny lohan’ilay lehilahy, ary nosintonin’izy ireo ny kitapo nisy ny vola 50 tapitrisa ariary ary lasa nitsoaka izy ireo, nandeha môtô. Polisy iray nandrindra ny fifamoivoizana no nahatazana ny zava-nitranga ka niantso ny namany ary nifanenjehana ireo jiolahy.
Tsy lasa lavitra dia tratra ny iray, nosarihan’ny polisy avy teny ambony môtô fa ny faharoa kosa nirifatra. Io tratra io no noterena hanoro ny toerana misy ny namany saingy narirarirany teo ny polisy sy ny tompon’ny kioska.
Toerana maromaro no natorony ka narahin’ireo polisy hatrany amin’ny village touristique sy Antsahabingo ary Ambalavola saingy tsy tratra ilay faharoa. Tranona ramatoa iray no notondroiny ho nanafenana ilay vola saingy rehefa natao ny fisavana dia tsy hita.
Nampiahiahy ny polisy ny fihetsik’ilay ramatoa ka nosamborin’ny polisy ihany koa izy, hohadihadiana. Mbola mitohy ny fanadihadiana fa hatreto dia tsy hita mihitsy ilay vola voaroba.